न्यूजिल्याण्डद्वारा भारतसामु २१३ रनको लक्ष्य, कसले जित्ला सिरिज ? - Everest Dainik - News from Nepal
न्यूजिल्याण्डद्वारा भारतसामु २१३ रनको लक्ष्य, कसले जित्ला सिरिज ?
काठमाडौं, माघ २७ । भारत विरुद्धको तीन टी–२० सिरिज अन्तर्गतको अन्तिम तथा निर्णायक खेलमा न्यूजिल्याण्डले २१३ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको न्यूजिल्याण्डले निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाउँदै २१२ रन बनाएको हो ।
याे पनि पढ्नुस टी–२० सिरिजः पहिलो ओभरमै भारतलाई झड्का, पूरा गर्ला २१३ को लक्ष्य ?